Izindawo ezi-6 ezibalulekile ongazivakashela eFuerteventura | Ukuhamba kwe-Absolut
Izindawo ezi-6 ezibalulekile ongazivakashela eFuerteventura
Ukuhamba kwe-Absolut | | Iziqhingi zaseCanary
Ihlobo liyaphela bese kuqala ikwindla, isikhathi sonyaka esibonakala ngokuncishiswa kwamahora emini, ukwehla kwamazinga okushisa, futhi kungaba kanjani ngenye indlela, ukubuyela esimisweni. Uchungechunge lwezinto eziyimbangela yesifo sangemva kweholide sihlupheke yingxenye enkulu yabantu. Kepha ungakhathazeki, izinyanga zikaSepthemba, Okthoba noNovemba nazo ziyafana nokuhamba, ikakhulukazi uma sikwenza ku izindawo ezinelanga ezifana neFuerteventura.
Ilanga likhanya izinsuku ezingama-300 ngonyaka kulesi siqhingi seziqhingi zaseCanary ezise-Atlantic Ocean. Ithuba eliyingqayizivele lokujabulela lesi siqhingi sehlobo laphakade kwelinye lamahhotela abantu abadala kuphela eFuerteventura, ngenkathi amabhishi angaphezu kwamakhilomitha ayi-150 ekwenza uzizwe usepharadesi. Ungaphuthelwa yilezi zindawo ezibalulekile ongazivakashela eFuerteventura.
1 ICorralejo Dunes Park Yemvelo
2 INhlonhlo YaseJandía
3 IVilla de Betancuria
4 Imigede ka-Ajuy
5 Intaba engcwele yaseTindaya
6 UMnyuziyamu waseMajorero Cheese
ICorralejo Dunes Park Yemvelo
Amakhilomitha angama-35 nje ahlukanisile nePuerto del Rosario, inhlokodolobha yaseFuerteventura, nePaki Yemvelo Yezintaba zaseCorralejo. Le nsimu yesihlabathi esidalwa ngamakhemikhali (esivela ekuqhekekeni nasekuguqulweni kwamagobolondo ezinhlanzi, ama-bivalves, kanye nezinye izinto zasolwandle) inendawo engaphezu kwamahektha angama-2.600 XNUMX esihlabathi esihle esimhlophe. Isici sogwadule sale ndawo evikelekile sifihla elinye lamabhishi aphakeme kakhulu esiqhingini, Ibhishi laseCofete. Njengoba inamakhilomitha ayi-12 esihlabathi esihle esimhlophe namanzi aluhlaza, le ndawo yasendle esenyakatho nenhlonhlo yaseJandía inikeza abahambi umuzwa ongachazeki wenkululeko noxolo.
Ihlukaniswe nayo yonke iFuerteventura yi-Isthmus of the Wall, eseningizimu yesiqhingi, iJandía Peninsula ingelinye lamapaki emvelo amakhulu kakhulu eziqhingini zaseCanary. Indawo ewugwadule lapho ungathola khona ukwazi indawo esesiqhingini esikhulu sehlobo laphakade. Indawo eyedlulele eyazisa ukuhlukahluka okukhulu kwezidalwa zezitshalo ezinjengophawu lweFuerteventura, i-cardón de Jandía. Ukuvakashela le ndawo yemilingo akukho okudlula ukuhlala e-Iberostar Selection Fuerteventura Palace, ihhotela elinokufinyelela okuhle emigwaqeni eyibhuqu exhuma neNhlonhlo yaseJandía.
IVilla de Betancuria
Idolobha laseBetancuria lasungulwa ngo-1404 nguJean de Bethencourt, umnqobi wokuqala weziQhingi zaseCanary. Leli dolobhana elincane elisogwini olusentshonalanga yesiqhingi Kwakuyinhloko-dolobha yezokuphatha iFuerteventura kwaze kwaba ngu-1834Yize manje kungumasipala onabantu abambalwa kakhulu onabantu abangu-800 kuphela. Yize lingenawo amabhishi e-paradisiacal, leli dolobha lezakhiwo zabamhlophe bendabuko linjalo iphuzu lentshisekelo enkulu yamasiko esiqhingini. Amakhulu abahambi avakashela le ndawo nsuku zonke ukuvakashela isonto laseSanta María de Betancuria, elisenkabeni yomlando wedolobha, noma i-Archaeological Museum, lapho izivakashi zinethuba lokubona ukuthi izakhamuzi zalo zasendulo zaziphila kanjani.
I-Ajuy iyindawo ethakazelisa kakhulu yokwakheka komhlaba kweziqhingi zaseCanary. Leli dolobhana elincane labadobi elinabantu abangu-150 kuphela, elisogwini olusentshonalanga yeFuerteventura, ligqame ugu lwaso oluhle lwesihlabathi esimnyama oluzungezwe amawa futhi, ikakhulukazi, emihumeni yalo yemvelo. Ingaphakathi lemigede yase-Ajuy, limemezele njengetshe lesikhumbuzo semvelo futhi lamukelwa njengenye yezindawo eziyikhulu ezinentshisekelo enkulu yokwakheka komhlaba emhlabeni yi-International Union of Geological Sciences (IUGS), evumela abahambi ukuba bazi umsuka nokwakheka kweFuerteventura cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-70 edlule. Uhambo lomlingo oluya esikhathini esedlule sesiqhingi lapho ungabona khona amadwala amadala kakhulu eCanary Islands, endaweni ebizwa ngeBasal Complex.
Intaba engcwele yaseTindaya
Intaba yaseTindaya isenyakatho ntshonalanga yeFuerteventura, eduze kwedolobha elingaziwa kumasipala waseLa Oliva. Yamemezela iSikhumbuzo seNdalo ngo-1994 ngobukhulu baso bendawo nokubukeka kwayo, okuyisibonakaliso kunazo zonke kulesi siqhingi, le ndawo yaziwa kakhulu yi cishe 300 podomorphic midwebo (okuqoshwe emadwaleni amise okwenyawo) kukhonjiswe ngesiko labomdabu lesiqhingi. Ama-majos noma ama-majoreros, izakhamizi zakudala zaseFuerteventura, babecabanga ukuthi iTindaya iyintaba engcwele futhi bayabela izakhiwo zemilingo. Empeleni, iTindaya idume kakhulu ngokuthi “Intaba Yabathakathi”.
UMnyuziyamu waseMajorero Cheese
Asikwazi ukushiya iFuerteventura ngaphandle kokujabulela eminye yemikhiqizo ejwayelekile ye-gastronomy yayo ecebile. Yize abahambi abaningi bengazi, I-Fuerteventura ikhiqiza olunye ushizi wezimbuzi oluhamba phambili emhlabeni, njengoba kwamukelwa yiWorld Cheese Championships, kuklonyeliswa ushizi weMajorero Maxorta njengowhamba phambili emhlabeni esigabeni soshizi wobisi lwembuzi ongelapheki olunama-flavour. Ngale ndlela, abathandi balokhu kudla abakwazi ukuphuthelwa yiMajorero Cheese Museum, lapho bangathola khona imvelaphi nokukhiqizwa komkhiqizo owaziwa kakhulu emhlabeni jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izindawo ezi-6 ezibalulekile ongazivakashela eFuerteventura
Yini ongayibona ku-Biarritz